Soo dejisan WinContig 3.0.0.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WinContig
WinContig – waa software si loo xoojiyo faylasha iyo faylasha shakhsiga ah iyada oo aan la isticmaalin nidaamkan oo dhan qalab adag. Software wuxuu kaa rabaa inaad ku darto ama aad u guurto faylasha daaqada muhiimka ah iyo bilaw inaad sii xajisid. Ka hor inta aan la bilaabin, WinContig wuxuu dirayaa codsi si loo hubiyo diskka iyo faylasha khaladaadka kaas oo gacan ka geysta yareynta khaladaadka inta lagu jiro mudista mudnaanta. Software wuxuu u ogolaanayaa inuu ku daro ama ka saaro faylasha qaar ama faylasha laga soo duubo oo lagu keydiyo faylasha xogta si loo fududeeyo dib u isticmaalkooda. WinContig waxay si toos ah u fulin kartaa hawlaha la qorsheeyey oo ay maamulaan xuduudaha kala duwan iyada oo loo marayo khadadka taliska kaas oo si weyn u fududeynaya hawsha shaqada. Sidoo kale WinContig waxaa lagu daabici karaa wareejiyaha warshadaha, tusaale ahaan, flash drive oo loo isticmaalo doorbidkaaga shakhsi ahaan kombuyuutar kasta.
Diiwaangelinta faylasha xulashada
Isku-darka faylasha ee feylkaaga
Maaraynta istaraatiijiyada xakamaynta
Soo dejisan WinContig
Faallo ku saabsan WinContig
WinContig Xirfadaha la xiriira